संकटमा परेको संविधानNepaliPatra News
RSS EDT 5:37
Links Exchange	संकटमा परेको संविधानवाचस्चति रेग्मी[ ]देशको मूल कानून भनेको संविधान हो । संविधानमा जनताको हक, अधिकार व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यही संविधान छैन भने त्यो देशमा कानुनको अवस्था के हुन्छ ? त्यहाँका जनताको कानुनी राज्यको अवस्था संविधान विनाक के रहन्छ ? यसैले संविधान नेपालको सन्दर्भमा अति महत्वपूर्ण हो । छापाहरुमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई असफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेर्न थालिएको छ । वास्तवमा संविधान बनाउने कुरा एक जनाको प्रयासले मात्रै हुने होइन । यसमा सामूहिक प्रतिवद्धता र सामूहिक प्रयास जरुरी छ । नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्दा अरुलाई दोष दिने अवस्था छैन ।आजसम्म नेपालमा बितेको समयलाई हेर्नुस्, त्यो बितिसक्यो अब सुधार्न सकिने अवस्था छैन, जसले नेपाललाई आज यो स्थितिमा पुर्‍यायो । वास्तवमा बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिको राजनैतिक अवस्थाको चिरफार गर्नुपर्दा नेताहरुले आफूलाई नेता हुँ भनेर फूर्ति नलगाए हुन्छ । मबाट अब नेपाल बन्छ र म सच्चा नेता हुँ भन्ने कुराको अब जरुरी छ र जनताले ती नेताको पछि लागेर पाइने अवस्था अब देखिदैन । यो कुरा विगतको नेताहरुको कार्यशैली र क्रियाकलापले पूष्टि गरेको कुरा हो । भविष्य भनेको तपाईं बाँच्नु हुन्छ, हुँदैन थाहा छैन । भविष्यवाणी पनि सधैँ नपुग्न सक्छ । भोलि गर्छु भने कुरा असम्भव छ भने वा कसैलाई छलछाम गर्नुछ भने भन्दा हुन्छ । त्यसैले भविष्य अन्योल हुन्छ । वर्तमान हो महत्वपूर्ण कुरा । जुन कुरा तपाईंको अगाडि छ । तपाईं गर्न पनि सक्नु हुन्छ र तपाईंको आˆनो काबुभित्र (आफ्नो पकड) पनि छ । यदि तपाईं वर्तमानमा चल्न सक्नु भयो भने मात्रै तपाईंले वर्तमानमा चल्न सक्नु भयो भने मात्रै तपईंले सोचेको पुग्ला । यस अर्थमा नेपालको राजनैतिक अवस्थाको उतारचढाव हेर्दा कमसेकम डा. बाबुराम भट्टराईले मैले संविधान बनाउन सकिनँ वा अब संविधानसभा सामूहिक प्रयास वा ताजा जनादेश बेगर हुँदैन भनेर प्रकाशमा ल्याए । कसम खाएर भन्न सक्नुपर्दछ कि संविधान सभाको म्याद २ वर्ष मात्रै थियो । अन्तरिम संविधानले संविधानसभाका निर्वाचन १ पटक हुने र २ वर्ष कार्यकालको हुने भनेर परिभाषित गरेको थियो । त्यो म्याद २ वर्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री छँदैमा समाप्त भइसकेको थियो र निष्त्रिmय त्यो बेला नै हुनु पर्ने थियो । हिजो गिरिजा बाबु, मनमोहन अधिकारीजस्ता सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको अस्पतालमा भर्ना भएर मृत्यु भइसके पनि डाक्टरले मृत्यु घोषणा नगरेर अक्सीजनको सिलिण्डरको भरमा बचाइराखेका थिए । वास्तवमा मृत्युलाई कसैको केही लागेन । मरेर आइसीयूमा रहेको नेताहरुलाई डाक्टरले मृत्यु सर्टिफिकेट दिनै पर्‍यो । एकदिन बाँच्नै नसक्ने र ब्युँताउनै नसक्ने बिरामीलाई जसरी पनि मृत्यु घोषणा गर्न बाध्य भए डाक्टरहरु, हो त्यही अवस्था हो आजको संविधानसभा । नेपालमा एकअर्कालाई दोष दिने अवस्था छैन । वास्तवमा नेपालमा एक अर्कामा विश्वास छैन । जबसम्म विश्वासको सङ्कट रहन्छ तबसम्म न त शान्ति नै कायम हुन्छ नेपालमा, न त संविधान नै बन्दछ किनकि २ वर्षअघि समय सकिएको, मरेको संविधानसभा यस पटक बाबुराम भट्टराईको पालामा मृत्यु घोषणा वा अर्को निर्वाचनका लागि ताजा जनादेशको लागि घोषणा गरिएको हो । यो एउटा आजको वास्तविक माग हो । यहाँनेर नेताहरुलाई नेताहरुकै नाम लिएर दोष दिनुभन्दा पनि अस्पतालमा भर्ना भई मरेको वा कोमामा रहेको मानिसलाई डाक्टरले मृत्यु घोषणा नगर्दासम्म मरेको भन्न पाइँदैन किनकि त्यो बिरामी अस्पतालको बेडमा छ । अस्पतालको डाक्टरले मात्रै त्यो घोषण गर्न पाउने अधिकार छ । त्यसैले यस बेला संविधानसभाको अन्त्य प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् । त्यो उनीद्वारा मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । वास्तवमा नेताहरुले राजनीतिलाई जागिर र तलब पाउने थलोको रुपमा लिएपछि अरु आम्दानी गर्ने क्षेत्रको खोजी गरिरहनु परेन र मागी खाने भाँडोको रुपमा देशको राजनेताहरुको हतियार भयो । अन्यथा देश र जनताका हितका लागि किन इमान्दारिता गर्न कन्ज्युस्याईं गर्ने ? यदि इमान्दारिता र समझदारी नेताहरुको डिक्स्नेरीमा छैन भने त्यस्ता नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत् जनताहरुले हटाउनै पर्दछ । अन्यथा, देशको हालत यस्तै रहिरहनेछ । अरुलाई दोष दिएर आफू चोखो, राम्रो र आफ्नो मात्रै निर्णय सही मान्ने आज जुन गलत प्रवृतिको विकास भएको छ, त्यो नै ँविनास काले विपरीत बुद्धि’ भन्ने कुराको उखान चरितार्थ भएको मान्नै पर्ने हुन्छ । एकले अर्कोलाई सखाप पार्ने, एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई सखाप पार्ने मरिमेट्ने प्रकृतिको हावि भएर नेपाल वर्तमान सङ्कटको घडीमा आइपुगेको हो । वास्तवमा राजनीति खतरनाक खेल हो । बुझ्ने र इमादारीपूर्वक गर्नेलाई देश र जनताको हितका लागि हो राजनीति, तर खतरनाक खेल खेल्नेका लागि सदासदाका लागि टुङ्ग्याउने खेल पनि हो राजनीति । त्यसैले २ वर्षअघि नै संविधानसभाको म्याद थप्नु असंवैधानिक थियो । त्यसपछिका सबै कार्यहरु गैरसंवैधानिक छन् । कुनै पनि कुरा न्याय सङ्गत संविधानप्रदत्त र सबैको हितमा हुन्छ । यहाँनेर भुल्नु नहुने कुरा के छ भने, त्यो २ वर्ष पुगेर पछिको म्याद थप्ने कार्य नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको हितमा थियो । जतना र देशको हितमा थिएन, त्यो बेला पनि । त्यो बेला माओवादीलाई तेजोबध गर्न मात्रै थियो । सरकारमा जान नदिनु मात्रै थियो, गाली गर्नु मात्रै थियो । माओवादीको धज्जी उडाउनु मात्रै थियो र संविधानसभा संविधान बनाउनको लागि निर्वाचन भएकोमा सरकार ढाल्न र सरकार गठन गर्न हो भन्ने मात्रै खेलको ग्राउण्डमा विकसित गराएर लगिएको थियो । जुन कुरा संविधानसभाको मर्म र भावनाविपरीत थियो । संविधानसभा माओवादीको माग हो । शान्ति रुपान्तरणका लागि हो तर कोठामा बिरालो बाँधेर पिट्दा त्यो बिरालोले आफूलाई टोक्न सक्छ भन्ने हेक्का नराखेजस्तै सबै पार्टी मिलेर समझदारीमा संविधान बनाउन नलागेर सत्ताको खेलमा लाग्दा नेपालको यो हालत हुन पुगेको हो । यदि कोही नेता, नागरिक समाज, बुद्धिजिवीहरुलाई नेपाल बन्द गरेर एवं नेताहरुलाई गाली गरेर नेपाल बन्छ भन्ने भ्रम छ भने त्यो भ्रम छाडे हुन्छ । आफ्नो गल्ती, कमजोरी पनि ख्याल गरेर देशका लागि के दिइरहेको छु भन्ने कुराको सबैमा हेक्का नभएसम्म कीमार्थ नेपालको हितमा परिस्थिति रहने छैन । मातृभूमिको हित हुने छैन । वितृष्णामा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र सिफारिसवादको अन्त्य नभएसम्म नयाँ नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन । यसका लागि ताजा जनादेश आजको अवश्यकता हो । संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन र स्वच्छ छविका विद्यायकहरुबाट मात्रै नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । यसका लागि निर्वाचनमा जानु बाहेक अर्को विकल्प छँदैछैन । विकल्प एउटा छ, त्यो हो- संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्ने । यो भनेको राजा ज्ञानेन्द्रलाई तर्साएर २०६१/६२ मा जनआन्दोलन गरेर संसद् पुनस्र्थापना भएको अवस्था हो । त्यही अवस्थाको परिणाम हो, आजको बिग्रेको नेपालको राजनैतिक अवस्था । त्यसकारण ताजा जनादेशले भ्रष्ट नेताहरुको उन्मूलन हुन जान्छ र नेपाल बन्न सक्छ । यो कुराको जनतालाई चेतना भया । Views : 209 | Last Updated : 2012-06-20 10:39:41 No comments so far